Phupha ngeZantsi Discover Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi "iimpahla zangaphantsi" libhekisa kwimpahla yangaphantsi entle kwishishini lempahla. Oku akuyomfuneko ukuba kube yinkanuko okanye inkanuko, kodwa kuhlala kunjalo. Kuba kuhlala kucingelwa ukuba isibini sivuswa ngokwesondo ngokunxiba iimpahla zangaphantsi; Ingubo enjalo inokuphinda ithengise itafile yakho yokunxiba okanye ubonise nje ukubaluleka kwakho kuyo.
Kodwa kutheni ngoku sibona iimpahla zangaphantsi emaphupheni? Ngaba eli liphupha lokwabelana ngesondo? Okanye ngaba ukhona omnye umyalezo ngasemva koku? Ukutolikwa kwesimboli yamaphupha "iilingesi", izinto ezinje ngezi zangaphantsi, ezinje ngesilika okanye i-satin, nazo zinokubaluleka.
1 Uphawu lwephupha «iimpahla zangaphantsi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iimpahla zangaphantsi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iimpahla zangaphantsi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iimpahla zangaphantsi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, imeko yomphuphi ngokubhekisele kwisini sakhe nakwakhe Umzimba umboniso. Iphupha lakho lezambatho ezithandekayo kufuneka zikwenze wazi malunga neemfuno zakho zesondo ukuze ukwazi ukujongana nazo ngokusondeleyo el mundo yomlindo.
I-Chic okanye iimpahla zangaphantsi ezintle ephupheni zibonisa ubudlelwane obulungileyo obulele kunye nolwalamano olusondeleyo. Nabani na onxiba iimpahla zangaphantsi njengempahla yangaphantsi ephupheni lakhe unokuba nethemba lokonwaba kwaye amaxesha okuphumelela ndijonge phambili.
Ukukhulula iingubo zakho zangaphantsi ephupheni kunokubonisa ukuba awufuni ukuqhubeka nezicwangciso zakho. Ukuba omnye umntu ukhulula iimpahla ezimdaka zephupha, ubudlelwane kunye nalo mntu bunokuba ngumqobo.
Ukuvalwa kweempahla zangaphantsi okanye ezangaphantsi kwindawo yokuhlamba iimpahla njengomfanekiso wephupha, ngokwendlela etolikwa ngayo iphupha, kubonisa ukuba umntu ophuphileyo wahlukile kwezinye iirotic. iimvakalelo Ndifuna ukukhulula kubomi bokuvuka. Ubukhulu becala, le meko yamaphupha inxulumene neemvakalelo kwindawo ye-erotic.
Ukuba umntu oleleyo uzibona enxibe iimpahla zangaphantsi kuphela ephupheni lakhe kwaye enebhongo ngomzimba wakhe, ungowakhe. Umngcipheko uyazi ngemicimbi yeemvakalelo. Nangona kunjalo, uyayazi indlela yokusebenzisa obu buntununtunu ngokufanelekileyo. I-bra ebukekayo eneempawu ezimfutshane xa ulele ihlala iqondwa njengophawu lwangaphakathi okanye iimvakalelo ezingaziwayo.
Uphawu lwephupha «iimpahla zangaphantsi» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, iilingerie zithathwa njenge- Isondo lesini ijongiwe. Indoda okanye umfazi ophuphayo kufuneka ayazi iminqweno yabo kunye neemfuno zabo kwinkalo ye-erotic ukuze bajongane nayo. Kungenxa yokuba kuphela ngenkxalabo enkulu yezi zinto aya kuthi umntu ochaphazelekayo akwazi ukujongana nazo ngokukhululekileyo.
Ukutolikwa kwengqondo kwesimboli yamaphupha «iilingerie» kukwabhekisa kwi umbala ingqalelo ekhethekileyo yahlawulwa kwiimpahla zangaphantsi. Kungenxa yokuba kule, izigqibo ezingaphezulu zinokutsalwa kumyalezo wephupha. Ke ngoko, uphawu lwephupha "imibala" kufuneka lisetyenziswe kule meko.
Iimpahla zangaphantsi ezibomvu njengephupha zibhengeza ukulangazelela enye uthando olunomdla kunye nombutho. Ukuba iimpahla zangaphantsi zimnyama ephupheni, umphuphi uya kuthi kungekudala afumane imfihlo anqwenela ukuyityhila. Iimpahla zangaphantsi ezimhlophe eziphuphayo zibonisa ubumsulwa, kodwa kunye nesilingo.
Uphawu lwephupha «iimpahla zangaphantsi» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kuyabona kumfanekiso wephupha "iilinisi" ngohlobo lwempahla yangaphantsi yabasetyhini, isalathiso kulowo uphuphayo malunga Umngcipheko kwizinto zokomoya. Unqwenela ukukhuselwa apha, kodwa kwangaxeshanye ufuna ukuqala ngokutsha.